Telesom oo maanta si rasmi ah u daahfurtay adeegga casriga ah ee isku-xidhka farriimaha moobilka iyo emailka caanka ah ee gmail (Gmail-SMS Chat)+Daawo Sawiradda(Hadhwanaagnews) Monday, July 09, 2012 Hargeysa (HWN) Shirkadda Telesom ayaa maanta si rasmi ah u daahfurtay adeegga casriga ah ee isku-xidhka farriimaha moobilka Telesom iyo emailka caanka ah ee gmail, oo ay leedahay shirkadda Google. Hargeysa (HWN) Shirkadda Telesom ayaa maanta si rasmi ah u daahfurtay adeegga casriga ah ee isku-xidhka farriimaha moobilka Telesom iyo emailka caanka ah ee gmail, oo ay leedahay shirkadda Google.
Adeeggan oo cusub oo loogu magacdarro GMAIL SMS CHAT waxa uu u suurtogelinayaa in farriimo bilaash ah macaamiishu ay uga diraan gmailkooda moobilada Telesom, kuwaasi oo iyaguna u soo jawaabi kara.
Shirka Jaraaid oo ay shirkaddu ku soo bandhigtay adeeggan casri ah oo ay ku qabatay Hotel Maansoor, waxa ka hadlay masuuliyiin ka socota shirkadda oo ka
warramay faaiidada barnaamijkan iyo guud ahaan adeegyada kale ee shirkaddu ay siiso Macaamiisha.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Waxa kale oo masuuliyiintu ay ka warrameen in ay maanta la kulmi doonaan wefti ka socda Shirkadda Google, oo ay ka wada hadli doonaan horumarinta adeeggan iyo soo bandhigidda adeegyo kale.
Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha & Daryeelka Macaamiisha, Mr. Mustafe Aadan Muuse oo ka hadlay shirkaasi jaraaid waxa uu sheegay in adeeggani uu ka mid yahay adeegyada loo yaqaano Value Added Services, oo ah adeegyo dheeraad ah oo macaamiisha loogu daro adeegyadii lafdhabarka ahaa ee sida codka, Zaadka iyo internetka ee ay ku isticmaali jireen moobilkooda.
Mr. Mustafe waxa kale oo uu sheegay in ay hore u jireen adeegyo VAS ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin barnaamijka AqoonMaal, oo ay macaamiishu kala socdaan wararka iyo macluumaadka kale ee faaiidada u leh. Waxa kale oo sharaxaad ka bixiyay Adeegga Shaafi, oo ah barnaamij caafimaad oo loogu talogalay hooyada uurka leh.
Mr. Cadnaan Daahir Muxumed, Madaxa Xidhiidhka Caalamiga ah ee Shirkadda TElesom oo isna ka hadlay shirka jaraaid waxa uu sheegay in shirkaddu ay la leedahay xidhiidho ganacsi oo waaweyn shirkado kala duwan oo ka mid ah adduunka sida Eeshiya iyo Yurub; kuwaasi oo ah shirkadaha soo saara qalabka isgaadhsinta casriga ah iyo shirkadaha kale ee telefoonda dibadda. Waxana uu Mr. Cadnaan sheegay in xidhiidhkaasi muhiim u yahay sidii ay macaamiishoodu u heli lahaayeen adeegyo tayo leh oo kuwajahan xidhiidhka dibadda iyo gudahaba. Madaxa Xidhiidhka Caalamiga ah waxa kale oo uu sheegay in ay jiraan wadamo badan oo ay ugu muhimsan yihiin kuwa ay bulshada Somaliland ku xidhan tahay oo ay ka hirgeliyeen 2 sanno horteed oo ah adeegga loo yaqaano Mushaax, oo suurtogelinaya in macmiilku uu moobilkiisa Telesom la tago meelkasta oo adduunka ka mid ah; isla markaana ay qurbajoogga reer Somaliland la iman karaan wadanka simcardskooda dibadda oo ay kaga hadli karaan Network-ga Telesom.
Cadnaan waxa uu intaasi ku daray in adeegga GMAIL SMS CHAT loogu talogalay qurbajoogga, si ay si joogto ah ugula xidhiidhaan ehelkooda ku sugan wadanka ee isticmaalka moobilka Telesom; waxa kale oo adeeggan loogu talogalay dhallinyarada oo si fudud ula qabsan og teknoolajiyadda, isla markaana jeebkoodu yar yahay oo ka faaiidaysanaya farriimahan bilaa lacagta ah. Waxa kale oo GML SMS ka faaiidaysan doona goobaha waxbarashada, caafimaadka iyo goobaha kale ee bulshada.